Myanmar Gospel Skit (ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်သစ်) When the Lord Returns, Will He Still Be Called Jesus? | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
Myanmar Gospel Skit 2019 (သင် အမှန်တကယ် နောင်တရပြီလား) Myanmar Gospel Skit - ဖြစ်ချင်သည့် စိတ်ကူး Myanmar Gospel Skit (ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်သစ်) When the Lord Returns, Will He Still Be Called Jesus? Myanmar Gospel Skit 2020 (ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ခြင်းရလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပါသလား) Myanmar Gospel Skit (သခင်တံခါးခေါက်နေသည်) | Have You Heard the Voice of the Lord? Myanmar Gospel Skit (အမှန်ဆိုတာ အမှား မဟုတ်နိုင်ပါ) How to Discern the True Christ and False Christs 2019 Myanmar Gospel Skit (သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်) Myanmar Gospel Skit 2019 (နွားတင်းကုပ် ထဲတွင် စုရုံးခြင်း) New Myanmar Christian Skit (ရဲ၏ လှည့်ကွက်များ) New Myanmar Gospel Skit (နှစ်သစ်ကူးမှာ ရဲ လာလည်သည်)
ရှုရှင်သည် အိမ်တွင်းအသင်းတော် အကျိုးတော်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သခင့်၏ ပြန်ကြွလာခြင်းကို စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် အစဉ်အမြဲ ရှာဖွေနေသလို၊ တောင့်တသူလည်း ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်တွင် သူမ၏ တူမဖြစ်သူက၊ သခင် ပြန်လာသည့်အခါ နာမသစ်တစ်ခုကို ခံယူမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏နာမသစ်ကို လက်ခံသူတို့ကသာ ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်ရှေ့သို့ ချီမခံရလိမ့်မည်ဟု သူမကို သက်သေခံပါသည်။ တူမဖြစ်သူက ဤသက်သေခံချက်ကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှ ပရောဖက်ပြုချက်တွင် အခြေခံခြင်းဖြစ်သည်၊ "အကြင်သူသည် အောင်မြင်၏။ ထိုသူကို ငါသည် ငါ၏ ဘုရားသခင့်ဗိမာန်တော်၌ တိုင်ဖြစ်စေမည်။ နောင်တစ်ဖန် သူသည် ပြင်သို့မရွေ့ရ။ ငါ၏ ဘုရားသခင့်နာမတော်ကို၎င်း၊…ငါ၏ ဘုရားသခင့်မြို့တော်၏ နာမကို၎င်း၊ ငါ၏ နာမသစ်ကို၎င်း၊ ထိုသူအပေါ်၌ ငါသည် အက္ခရာတင်မည်" (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၃:၁၂)။ သို့သော် ရှုရှင်က ယုံကြည်သည်မှာ ယေရှု၏နာမသည် ဘယ်သောအခါမျှ ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်၊ သခင် ပြန်လာသည့်အခါ သူ့အား ယေရှုဟုသာ ဆက်၍ခေါ်ဝေါ်လိမ့်မည် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤကွဲလွဲမှုကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ယောက် ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု ဖြစ်ကြလေသည်။ ၎င်းတို့ဆွေးနွေးမှု၏ ရလဒ်မှာ မည်သို့ရှိခဲ့သနည်း။ သခင်သည် ပြန်လာသည့်အခါ နာမသစ်တစ်ခုကို တကယ်ပင် ခံယူမည်လော။ အမှန်ကို ရှာဖွေရန်အတွက် ယခု တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ် ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်သစ် ကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
Myanmar Worship Music 2020 (ဘုရားသခင်၏နှိမ့်ချ မှုသည် အလွန် ချစ်စဖွယ် ကောင်းသည်)
Myanmar Gospel Music 2020 - လူသားအပေါ် ဘုရားသခင်၏ဒဏ်ခတ်ခြင်းနေ့ရက်သည် ယခုရောက်ရှိလို့လာပြီ